၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အာဏာသိမ်းပိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မနက်ပိုင်းအချိန်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နှင့် အခြားသောပါတီဝင်များကို ဖမ်းဆီးခဲ့‌လေသည်။ ထို့နောက်တပ်မတော်သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြင့် နိုင်ငံ‌တော်အရေးပေါ်အခြေအနေကိုကြေညာခဲ့ပြီး တပ်မ‌တော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် မင်းအောင်လှိုင်အား အာဏာလွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ အာဏာသိမ်းပိုက်ပြီးမကြာမီတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဝေါ်ကီတော်ကီပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့်လည်းကောင်း ဦးဝင်းမြင့်ကို ကိုဗစ်ကာလ၌ ကျန်းမာရေးထုတ်ပြန်ချက်များကို မလိုက်နာခြင်း‌ကြောင့်လည်းကောင်းတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
ဖမ်းဆီးခံရသော အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဝဲ) နှင့်
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင်လွှတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် တိုင်းပြည်အတွင်း မတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၅၈ နှင့် ၁၉၆၀ အကြားတွင် တပ်မတော်သည် ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုအစား တိုင်းပြည်ကို‌ခေတ္တအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကိုကျင်းပပေးခဲ့သော်လည်း ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းသည် အာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့‌လေသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် အရေးအခင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ရာ ဦးနေဝင်းအစိုးရကို ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့လေသည်။ သို့သော် တပ်မတော်ဦးစီးသော နအဖအဖွဲ့သည် ချက်ချင်းအာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ရွှေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့ရာ ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် အနိုင်ရခဲ့လေသည်။ သို့သော်တပ်မတော်သည် ထိုရလဒ်များကို အသိအမှတ်မပြုခဲ့ရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချခဲ့သည်။
စစ်တပ်အစိုးရသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ပြီးဆုံးခဲ့သော်လည်း အရပ်သားအစိုးရ၏ပါတီမှာ စစ်တပ်ကသာဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၏ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည်ထပ်မံ၍ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော် လွှတ်တော်၏ နေရာများအနက် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုတပ်မတော်က နေရာယူထားသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၏ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် လွှတ်တော်နေရာ ၄၇၆ နေရာအနက် ၃၉၆ နေရာကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ရာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ထက်ပင် ပို၍များပြားသည်။ တပ်မတော်၏ပါတီဖြစ်သော ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကမူ နေရာ ၃၃ နေရာသာ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ထိုအခါတပ်မတော်သည် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များကို အမှန်မဟုတ်ကြောင်းစွပ်စွဲခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်ရာ ပြင်သစ်၊ အမေရိကန်နှင့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့သည် အာဏာသိမ်းပိုက်နိုင်သည့်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ခဲ့ကြသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ပြောရေး‌ဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် အခြားသောပါတီခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည် ဟုဆိုသည်။ မိမိကိုလည်းတပ်မတော်မှ လာရောက်ဖမ်းဆီးနိုင်ချေရှိကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အင်တာနက်လိုင်းနှင့်ဖုန်းလိုင်းများမှာလည်း ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားလေသည်။
ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များ အယောက် ၄၀၀ ခန့်ကို နေပြည်တော်၏ အစိုးရအိမ်များ၌ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချခဲ့သည်။ ထိုအခါ NLD သည် ထိုဖမ်းဆီးခံရသောသူတို့အား ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့အထိ နေထိုင်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးခဲ့သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုသူများသည် ထိုကိုယ်စားလှယ်များကိုအိမ်တွင်း၌သာ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးစတင်ရန် ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ သို့ဖြစ်ရာတပ်မတော်သည် ထိုကိုယ်စားလှယ်များအား ၂၄ နာရီအတွင်း အစိုးရနေအိမ်များမှ ထွက်ခွာရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် NLD လွှတ်တော်အမတ်အယောက် ၇၀ တို့သည် စစ်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်သောအားဖြင့် လွတ်တော်အစည်းအဝေးစတင်သကဲ့သို့ သစ္စာဆိုကတိပြုခဲ့ကြသည်။
နေပြည်တော်နှင့် ရန်ကုန်မြို့များတွင် တပ်မတော်စစ်သားများကို တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ မြဝတီရုပ်မြင်သံကြားမှစစ်တပ်သည်တိုင်းပြည်ကို စတင်အုပ်ချုပ်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ဒုသမ္မတဦးမြင့်ဆွေသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ တရားဝင်အာဏာလွှဲပြောင်းမှုမရှိသော်လည်း ယာယီသမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်ကိုအရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ်ကြေညာခဲ့လေရာ နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးတို့ကို ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး‌မင်းအောင်လှိုင်အား အာဏာလွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီသည်တိုင်းပြည်ကို တစ်နှစ်မျှအုပ်ချုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထိုတစ်နှစ်ပြီးပါကရွေးကောက်ပွဲကို ပြန်လည်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်း၏ အဖွဲ့ဝင်ဘဏ်များသည် ငွေကြေးရေးလုပ်ငန်းများကို ရပ်ဆိုင်းထားရသည်။ တပ်မတော်သည် ပြည်​ထောင်စုဝန်ကြီးအသစ် ၁၁ ဦး ကို ခန့်အပ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်သည် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏နေအိမ်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်စီးခဲ့ရာ ‌သူမအားနိုင်ငံခြားမှဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ (ICOM စကားပြောစက် ၁၀ လုံးနှင့် Jumber တစ်လုံး) ကို တရားမဝင်တင်သွင်းသည်ဟု တရားစွဲ၍ရမန်ယူခဲ့သည်။ ထိုအမှု၏ပြစ်ဒဏ်သည် ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် အပြင် ဒဏ်ကြေးပါပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်အား ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော Car Campaign တွင် လက်ပြနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်ကို လူစုလူဝေးပြုလုပ်သည်ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ကာလများတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သည်ဟူ၍ လည်းကောင်း သဘာဝဘေးအန္တရယ်ကာကွယ်ရေး ဥပဒေဖြင့် တရားစွဲ၍ရမန်ယူခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် တတိယအကြိမ်မြောက် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) ကို Online Video Conferencing ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၇၅ နှင့် လေ့လာသူ အချို့တက်ရောက်ကာ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုခဲ့ကြသည်။
တပ်မတော်မှအာဏာသိမ်းပိုက်ခြင်းအကြောင်းအရင်းကို သေချာစွာမသိရသေးပေ။ တပ်မတော်သည် မဲစာရင်းမှားယွင်းမှုသည် နိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ အာဏာမသိမ်းပိုက်မှီရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် စစ်တပ်၏စွပ်စွဲမှုကို သက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့အာဏာသိမ်းပိုက်ရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းမှာ တပ်မတော်မှနိုင်ငံကို ဆက်လက်အုပ်ချုပ်လိုခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။
Justice For Myanmar အဖွဲ့သည် မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုတွင် စီးပွားရေးကိစ္စရပ်များရှိ‌သောကြောင့် စီးပွားရေးအဆင်မပြေမှုမဖြစ်စေရန် အာဏာသိမ်းပိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ မင်းအောင်လှိုင်သည် စစ်တပ်ပိုင်ဖြစ်သော မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်တို့ကိုချုပ်ကိုင်ထားပါသည်။  သူ၏သားသမီးများသည်လည်း စီးပွားရေးဆိုင်ရာနယ်ပယ်အချို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။
အာဏာမသိမ်းမှီရက်အနည်းငယ်အကြာက International Monetary Fund သည် ကိုဗစ်‌ရောဂါကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်အား အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅၀ မီလီယံ ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ထိုရန်ပုံငွေကို ထိုအဖွဲ့မှပြန်ယူခြင်းမရှိဘဲ ပေးအပ်ထားပါသည်။ နိုင်ငံရေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခံရသောအခါ IMF သည် အစိုးရပြည်သူ၏အလိုအတိုင်း ငွေကိုသုံးဆောင်သွားမည် ဟူ၍သာဆိုခဲ့သည်။ ဗဟိုဘဏ်၏အကြီးအကဲဖြစ်သူသည် စစ်တပ်မှဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပက်သက်၍ ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
တပ်မတော်၏အာဏာသိမ်းပိုက်မှုကို ဥပဒေလေ့လာသူများက မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြသည်။ NLD အစိုးရသည် တပ်မတော်၏ဥပဒေအသုံးချမှုကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။ တပ်မတော်သည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမှ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၇ နှင့် ၄၁၈ တို့ကိုအသုံးပြုခဲ့၍ အာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၇ အရ နိုင်ငံတော်သမ္မတကသာလျှင် နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကို အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီနှင့်တိုင်ပင်ပြီးမှသာ ကြေညာနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ထို့သို့ကြေညာပြီးမှသာလျှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၈ အရ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို အာဏာလွှဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အာဏာမသိမ်းပိုက်ခင်အချိန်တွင် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များမှာ ပြည်သူများကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့် အဖွဲ့ဝင်များပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်တပ်မတော်သည် ထိုကောင်စီကို ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကသာ ဦးဆောင်သည်ဟုဆိုခဲ့ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၇ နှင့် ၄၁၈ တို့ကိုအသုံးချခဲ့သည်။ ထိုသို့ဥပဒေများကို အသုံးချခဲ့သော်လည်း အစိုးရ၏တရားဝင်အတည်ပြုမှုမပါရှိခဲ့သောကြောင့် တပ်မတော်အနေဖြင့် ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်တရားဝင်သည် မဝင်သည်မှာ ဝေခွဲမရဖြစ်နေသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့တွင် ကျန်းမာရေးလုပ်သားများနှင့် အခြားအလုပ်သမားများသည် "ပြည်သူများမလိုက်နာခြင်း"ကို စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လူမှုကွန်ရက်၌လည်း "Civil Disobedience Movement" အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ follower ပေါင်း ၁၇၀,၀၀၀ ကျော်မျှပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ အစိုးရ၌လုပ်ကိုင်ကြသော အလုပ်သမားများသည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင် အနုနည်းဖြင့်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဆေးရုံနှင့် ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီ ၁၁၀ ကျော်မှ အလုပ်သမားများပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ဆရာဆရာမပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်နှင့် နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဖွဲ့ဝင်‌ဟောင်းများသည်လည်း ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ နေပြည်တော်၏ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ အလုပ်သမားများသည်လည်း ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ရှစ်လေးလုံးတွင်ပါဝင်ခဲ့သူ မင်းကိုနိုင်သည်လည်း ထိုသို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ရန်အတွက် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ဆန္ဒပြသရာတွင် လက်သုံးချောင်းထောင်ထားခြင်းကို သင်္ကေတပြုခဲ့ကြသည်။ အချို့သောအင်တာနက်အသုံးပြုသူများသည် အာရှ၏အွန်လိုင်းဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သော နို့လက်ဖက်ရည်မဟာမိတ် (Milk Tea Alliance) ဖြင့်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင် မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းသည် Civil Disobedience တွင်စတင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ "ကမ္ဘာမကြေဘူး" ဟူသောသီချင်းကိုသီဆိုခြင်းဖြင့်လည်း ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
မန္တလေး ဘူတာကြီးနား ၇၈ လမ်း၌ ဆိုင်ကယ်စီး၍ ဆန္ဒပြနေကြစဉ်
ရန်ကုန်မြို့ကဲ့သို့‌သောမြို့ကြီးများ၌ ‌ညနေ ၈ နာရီ အချိန်တိုင်းတွင် အိမ်တွင်း၌ "cacerolazo" ခေါ် အိုးများနှင့်သံပုံးများကို ရိုက်ခတ်ခြင်းဖြင့် စစ်အစိုးရကိုဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင် စစ်တပ်၏ထုတ်ကုန်များကို အားမပေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်းစတင်ခဲ့သည်။ ထိုအားမပေးသောထုတ်ကုန်များတွင် Mytel၊ မြန်မာဘီယာ၊ မန္တလေးဘီယာ၊ ဒဂုံဘီယာ စသည်တို့ပါဝင်ကြသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း Mytel ၌ အလုပ်သမား ၇၁ ဦးသည် လုပ်ငန်းမှထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့ ညနေ ၈ နာရီ၌ အချို့သောရန်ကုန်သားများသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားစေလွှတ်ရန် ၁၅ မိနစ်မျှထွက်ရောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ မန္တလေးစည်ပင်မှ အဖွဲ့ဝင် ၆ ယောက်သည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်တွင် လုပ်ငန်းမှထွက်ခွာခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ်ရှေ့၌ လူအယောက် ၃၀ ဆန္ဒပြခဲ့ကြရာ ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ လူအယောက်နှစ်သောင်းခန့် လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့၍ အောင်ဆန်းစုကြည်အားလွတ်‌ပေးရန်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် မန္တလေးနှင့် ပြဉ်းမနားမြို့တို့၌လည်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် တပ်မတော်သည် ဖေ့စဘွတ်လူမှုကွန်ရက်ကို "တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်လို‌သောကြောင့်" ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်နေ့အထိပိတ်ပင်ရန် အင်တာနက်ပေးစွမ်းသူများကို အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ MPT သည်လည်း Facebook messenger၊ Instagram နှင့် WhatsApp တို့ကိုပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ တယ်လီနောကမူ ဖေ့စဘွတ်ကိုသာ ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ဖေ့စဘွတ်ကို ပြည်သူများမလိုက်နာခြင်းလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။ ဖေ့စဘွတ်အပိတ်ပင်ခံရသောအခါ အသုံးပြုသူများသည် တွစ်တာသို့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ရာ #RespectOurVotes၊ #HearTheVoiceofMyanmar၊ #SaveMyanmar. စသည်တို့ကိုရေးခဲ့ကြသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင် တပ်မတော်သည် တွစ်တာကိုပါပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်တွင် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂမှအင်တာနက်ပြန််််််ဖွင့်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သောကြောင့် အင်တာနက် လိုင်းများကိုနေ့လည်တွင်ပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော်လူမှုကွန်ရက်များကိုမူ ဆက်လက်ပိတ်ပင်ထားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးအိမ်ရာတိုးတက်ရေးစီးပွားရေးဖြစ်သော Amata Corporation သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်ဘီလီယံကုန်ကျသော စက်မှုတိုးတက်ရေးဇုန်တည်ဆောက်ခြင်းကို အာဏာသိမ်းပိုက်မှုကြောင့်ရပ်ဆိုင်းထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကားထုတ်လုပ်မှုအကြီးဆုံးဖြစ်သော စူဇူကီးသည်လည်း ပြည်တွင်းကားထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်ဆိုင်းထားသည်။ ရန်ကုန်စတော့အိတ်စချိန်းသည်လည်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကို ရပ်ဆိုင်းထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းစီးပွားရေးသည်လည်း ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ Kirin ကုမ္ပဏီသည်လည်း တပ်မတော်နှင့်လုံးဝ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ပြင်သစ်ရေနံကုမ္ပဏီဖြစ်သော Total SE သည် မိမိ၏ပံ့ပိုးမှုအပေါ် အာဏာသိမ်းပိုက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လေ့လာနေသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာလူမျိုးအ‌ယောက် ၂၀၀ ခန့်နှင့် အချို့သောထိုင်းဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအတွက် တက်ကြွသူများသည် ဘန်ကောက်မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးတွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။ ထိုဆန္ဒပြပွဲကိုရဲတပ်‌ဖွဲ့က ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး နှစ်ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့တွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် ကုလသမဂ္ဂ တက္ကသိုလ်၌ အာဏာသိမ်းပိုက်ခြင်းကို ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ‌ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင် ဝါရှင်တန်ဒီစီ၏ မြန်မာသံရုံးရှေ့၌ မြန်မာ-အမေရိကန်လူများ အယောက် ၁၅၀ ကျော် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ စင်္ကာပူရဲတပ်ဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းမပြုလုပ်ရန် သတိပေးခဲ့သည်။
အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ တရုတ်၊ မလေးရှား၊ ပါကစ္စတန်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ စင်္ကာပူ စသောနိုင်ငံများသည် အာဏာသိမ်းပိုက်ခြင်းကို စိုးရိမ်ပါ‌ကြောင်းနှင့် အစိုးရနှင့်တပ်မတော်တို့သည် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ဩစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ ဂျပန် နယူးဇီလန်၊ စပိန်၊ ဆွီဒင်၊ တူရကီ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံများ သည် ဖမ်းဆီးခံရသူတို့ကိုလွှတ်ပေးသင့်ကြောင်း ရာဇသံအမိန့်ဖြင့်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိုး ဘိုင်ဒင်သည်လည်း အာဏာသိမ်းပိုက်ခြင်းသည် နိုင်ငံတော်၏ဒီမိုကရေစီကို တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် တပ်မတော်အား လိုအပ်လာလျှင်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗီယက်နမ် နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့သည် ထိုအာဏာသိမ်းခြင်းကိစ္စကို ပြည်တွင်းပြဿနာအဖြစ်နှင့်သာယူဆ၍ ဝင်ရောက်မစွက်ဖက်လိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
ကုလသမဂ္ဂ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးချုပ်ဖြစ်သူ အန်တိုနီရို ဂူတာရက်စ်သည် ထိုသို့အာဏာသိမ်းခြင်းသည် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီကိုထိခိုက်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အာဆီယံအဖွဲ့သည်လည်း နိုင်ငံများအစည်းဝေးခေါ်ယူခဲ့၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဥရောပ သမဂ္ဂသည်လည်း ထိုသို့အာဏာသိမ်းပိုက်ခြင်းနှင့်ပက်သက်၍ ဝေဖန်ခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ဖော်ယူရေးနှင့် တပ်မတော်အားပစ်ဒဏ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် အစည်း‌အဝေးခေါ်ယူခဲ့ကြသည်။ သို့သော်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၁၅ နိုင်ငံလုံးမှ သဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့ပေ။ တရုတ်နှင့်ရုရှားနိုင်ငံတို့သည် အစိုးရနှင့်ပြန်လည်ဆွေးနွှေးလိုသည်ဟုဆိုကာ သဘောတူပေးရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော တရုတ်နှင့်ရုရှားနိုင်ငံတို့သည် ဗီတိုအာဏာကိုအသုံးပြုခဲ့၍ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ပိတ်ပင်ခဲ့သည့်အပြင် တရုတ်သည် "အစိုးရပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း" သာဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမဟုတ်ကြသော အိန္ဒိယနှင့်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့သည် ထိုသို့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ဖော်ယူရေးကို ပြုလုပ်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
"Myanmar coup: Aung San Suu Kyi detained as military seizes control" (in en-GB)၊ ဘီဘီစီ၊ 2021-02-01။
Beech၊ Hannah။ "Myanmar’s Leader, Daw Aung San Suu Kyi, Is Detained Amid Coup"၊ The New York Times၊ 31 January 2021။
"Myanmar military seizes power in coup after detaining Aung San Suu Kyi"၊ The Washington Post။
Foundation၊ Thomson Reuters။ Myanmar military seizes power, detains elected leader Aung San Suu Kyi။
Myanmar gov't declares 1-year state of emergency: President's Office။
Myanmar Leader Aung San Suu Kyi, Others Detained by Military။ VOA (Voice of America) (February 1, 2021)။
"Myanmar State Counsellor and President charged, detained for2more weeks" (in en-UK)၊ Myanmar Times၊ 2021-02-03။
Adange၊ Christy။ "Myanmar Coup: Aung San Suu Kyi charged with military for “transceiver and handshake”" (in en-NZ)၊ Wall Street Journal၊ 2021-02-04။
Quint၊ The။ "Days After Coup, Aung San Suu Kyi Charged for Breaching Import Law" (in en-IN)၊ The Quint၊ 2021-02-04။
Solomon၊ Feliz။ "After Myanmar Coup, Aung San Suu Kyi Accused of Illegally Importing Walkie Talkies" (in en-US)၊ Eminetra၊ 2021-02-03။
On This Day, The Day Myanmar’s Elected Prime Minister Handed Over Power (in en-US) (2020-09-26)။
Butwell, Richard (1960). "The 1960 Election in Burma". Pacific Affairs 33 (2): 144–157. Pacific Affairs, University of British Columbia.
Taylor၊ Robert (2015-05-25)။ General Ne Win။ ISEAS Publishing။ ISBN 978-981-4620-14-7။
How A Failed Uprising Set The Stage For Myanmar's Future။
Burma: 20 Years After 1990 Elections, Democracy Still Denied။
Dieter Nohlen, Florian Grotz & Christof Hartmann (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume I, p611 ISBN 0-19-924958-X
Myanmar’s 1990 Election: Born ofaDemocratic Uprising, Ignored by the Military။ ဧရာဝတီသတင်းဌာန။
How Myanmar's Fragile Push for Democracy Collapsed inaMilitary Coup။
"As Myanmar opens to the world, the mess inside becomes more apparent"၊ Bloomberg.com။
အာဏာမသိမ်းဘူးလို့ ‘မပြောနိုင်’ ဟု တပ်မတော် ခြိမ်းခြောက်
Australia joins list of countries warning Myanmar military against staging coup amid fraud claims (in English) (Jan 30, 2021)။
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီလို့ ယူဆ - NLD ပြောခွင့်ရသူ။ VOA Burmese။
Foundation၊ Thomson Reuters။ Aung San Suu Kyi and other leaders arrested, party spokesman says။
Internet disrupted in Myanmar amid apparent military uprising (in en-US) (31 January 2021)။
ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော် အပါအဝင် မြို့ကြီးအများစု အဆက်သွယ်ပြတ်နေ။ ဘီဘီစီမြန်မာ။
Myanmar Military Blocks Internet During Coup (in en) (2021-02-02)။
Hundreds of Myanmar MPs under house arrest (in en)။
Myanmar Military Give MPs 24 Hours to Leave Naypyitaw (in en-US) (2021-02-03)။
NLD lawmakers in Nay Pyi Taw defy military, take oath of office (in en-US) (2021-02-04)။
Statement on Recent Detainees in Relation to the Military Coup (2021-02-04)။
Three Saffron Revolution monks among those detained in February 1 raids (in en)။
Coup plunges Myanmar further intoaclimate of religious nationalism - UCA News (in en)။
"Myanmar's Aung San Suu Kyi 'detained by military', NLD party says"၊ ဘီဘီစီ၊ 1 February 2021။
Myanmar military says it is taking control of the country (1 February 2021)။
နိုင်ငံတော်ကို အရေးပေါ်အခြေအနေ တစ်နှစ်ကြေညာ၊ တပ်မတော်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း လက်ရှိဒုသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေက ယာယီသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ယူ
Myanmar military stages coup, declares state of emergency forayear (in en) (2021-02-01)။
Myanmar to clarify voter fraud, hold new round of elections (2021-02-01)။
Telecommunications disruptions shut down Myanmar banks (1 February 2021)။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး အမိန့်အမှတ်(၉/၂၀၂၁) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၆ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက် (in my)။
Myanmar military announces new State Administrative Council (2 February 2021)။
Aung San Suu Kyi, Win Myint to face charges as NLD calls for ‘unconditional’ release (in en-US) (2021-02-03)။
Myanmar police file charges against Aung San Suu Kyi after coup (in English) (Feb 3, 2021)။
Myanmar police file charges against ousted leader Aung San Suu Kyi under import-export law (in English) (Feb 3, 2021)။
Myanmar police charge ousted leader Aung San Suu Kyi, days after military coup (in English) (Feb 3, 2021)။
Myanmar DetainedaTeam of Journalists for FlyingaDrone။
Myanmar detains Australian adviser to Aung San Suu Kyi; first known arrest of foreign national since coup (in English) (Feb 6, 2021)။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် တတိယအကြိမ်မြောက် ￼ပထမပုံမှန် အစည်းအဝေး ပထမနေ့ ခေါ်ယူ ကျင်းပ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် တတိယအကြိမ်မြောက် ပထမပုံမှန် အစည်းအဝေး ပထမနေ့ ခေါ်ယူ ကျင်းပ
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် တတိယအကြိမ်မြောက် ပထမပုံမှန် အစည်းအဝေး ပထမနေ့ ခေါ်ယူ ကျင်းပ
Tatmadaw seizes power under state of emergency, to rule forayear (in en-US) (1 February 2021)။
Myanmar election commission rejects military’s fraud claims (29 January 2021)။
Min Aung Hlaing: the heir to Myanmar’s military junta (in en) (1 February 2021)။
Myanmar military appoints ministers after ousting Suu Kyi in coup (in en-GB)။
Could Min Aung Hlaing’s retirement break the political deadlock? (in en-US) (12 January 2021)။
Editor၊ Richard Lloyd Parry, Asia။ "Senior General Min Aung Hlaing’s secret motive for Burma coup" (in en)။
General Min Aung Hlaing is the ambitious army chief and international pariah who seized power in Myanmar (in en)။
Who profits fromacoup? The power and greed of Senior General Min Aung Hlaing။
Pierson၊ David (2021-02-02)။ Myanmar's military upended its comfortable status quo by stagingacoup. Why? (in en-US)။
Lawder၊ David။ "Days before coup, IMF sent Myanmar $350 million in emergency aid; no precedent for refund" (in en)၊ Reuters၊ 2021-02-03။
Lawder၊ David။ "IMF says members to guide decision on whether to recognize Myanmar's military leaders" (in en)၊ Reuters၊ 2021-02-05။
Transcript of IMF Press Briefing (in en)။
Crouch၊ Melissa (2021-02-02)။ The power and ambition behind Myanmar’s coup (in en)။
‘The constitution is invalid now’: NLD patron fires back at military (in en-US) (2021-02-01)။
After coup, medical workers spearhead civil disobedience campaign (in en-US) (2021-02-02)။
"Statement from Myanmar military on state of emergency" (in en)၊ Reuters၊ 2021-02-01။
Emergency Powers in Myanmar (in en) (2021-02-01)။
Myanmar latest: NLD calls for Suu Kyi's release (in en-GB)။
"Myanmar coup: Aung San Suu Kyi detained as military seizes control" (in en-GB)၊ BBC News၊ 2021-02-01။
Nay Pyi Taw, Mandalay healthcare staff to join 'Civil Disobedience Campaign' (2 February 2021)။
Myanmar Medics Prepare Civil Disobedience Against Military Rule (in en-US) (2 February 2021)။
Teachers, students join anti-coup campaign as hospital staff stop work (in en-US) (2021-02-03)။
Myanmar doctors stop work to protest coup as UN considers response (in English) (Feb 3, 2021)။
Myanmar’s Medics Launch Civil Disobedience Campaign Against Coup (in en-US) (2021-02-03)။
စစ်အစိုးရကို နေပြည်တော်က နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ (in my)။
Veteran activist calls for civil disobedience in wake of coup (in en)။
Myanmar blocks Facebook as resistance grows to military coup (in English) (Feb 5, 2021)။
#MilkTeaAlliance hasanew target brewing: Myanmar’s military (in en) (2021-02-04)။
Civilian Disobedience Campaign' takes flight in Myanmar (2021-02-05)။
Songwriter Who Provided ‘Theme Song’ to 8888 Uprising Finally Honored (in en-US) (2018-08-09)။
Myanmar coup: army blocks Facebook access as civil disobedience grows (in en) (2021-02-04)။
Anti-coup protests ring out in Myanmar's main city (in English) (Feb 2, 2021)။
Myanmar coup latest: UN Security Council stops short of issuing statement (in en-GB)။
Military Chief’s Family Members Spend Big on Blockbuster Movies, Beauty Pageants (in en)။
Thailand's Amata halts $1bn Myanmar property project after coup (in en-GB)။
Thai developer invests $1bn to put Myanmar industry on global map (in en-GB)။
Myanmar's real estate sector crashes (2021-02-05)။
Kirin beer company cuts brewery ties with Myanmar military over coup (in English) (Feb 5, 2021)။
Kirin, parent company of Australian beer company Lion, cuts ties with Myanmar military after coup (in English) (Feb 5, 2021)။
Staff၊ Reuters။ "Total assessing impact of Myanmar coup on its projects" (in en)၊ Reuters၊ 2021-02-04။
ด่วน! ชาว 'เมียนมา' ชู3นิ้วบุกประท้วงหน้าสถานทูต ต้านรัฐประหารในประเทศ (in th) (1 February 2021)။
Myanmar workers in Japan protest against Tatmadaw’s actions (2021-02-01)။
ဝါရှင်တန်ဒီစီက မြန်မာစစ်သံရုံးရှေ့မှာ အမေရိကန်ရောက် မြန်မာတွေဆန္ဒပြ (in my)။
Police issues warning against plans to protest in Singapore over current situation in Myanmar (in English) (Feb 5, 2021)။
Police warn against plans to protest in Singapore over situation in Myanmar (in English) (Feb 5, 2021)။
Feb 1၊ TIMESOFINDIA COM /။ Deeply concerned by developments in Myanmar, says India (in en)။
"Bangladesh wants democratic process upheld in Myanmar"၊ Dhaka Tribune၊ 2A Media Limited.၊ 1 February 2021။
Indonesia Urges All Parties in Myanmar to Exercise Self-Restraint။ Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
China 'notes' Myanmar coup, hopes for stability (1 February 2021)။
Press Release: Latest Situation in Myanmar။ Ministry of Foreign Affairs (Malaysia)။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Pakistan hopes from all sides in Myanmar to be restraint, work for peace: Zahid Hafeez (in en)။
"Philippines following Myanmar situation with deep concern"၊ Philstar.com၊3February 2021။
S. Korea expresses concerns over Myanmar coup (February 1, 2021)။ February 1, 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
MFA Spokesperson's Comments in Response to Media Queries on the Detention of Myanmar Leaders and Officials (1 February 2021)။
Goldman၊ Russell။ "Myanmar’s Coup, Explained" (in en-US)၊ The New York Times၊ 2021-02-01။
Australia joins global condemnation of Myanmar generals (in English) (Feb 1, 2021)။
Statement on Myanmar။
Justin Trudeau on Myanmar: “The democratic process must be respected” (2 February 2021)။
"Japan urges Myanmar military to free Suu Kyi, restore democracy"၊ Manila Bulletin၊ 1 February 2021။
Mahuta၊ Nanaia (1 February 2021)။ New Zealand statement on Myanmar။
Sánchez condena el golpe de Estado en Myanmar y pide vueltaala democracia (in es) (2021-02-01)။
Foreign Minister condemns military coup in Myanmar။ Sveriges Radio။
"Turkey condemns, 'deeply concerned' by coup in Myanmar"၊ Anadolu Agency၊ 1 February 2021။
UK condemns military coup in Myanmar (in en)။ Anadolu Agency (1 February 2021)။
Statement by White House Spokesperson Jen Psaki on Burma (1 February 2021)။
"‘Serious blow to democracy’: World condemns Myanmar military coup" (in en)၊ Al Jazeera၊ 1 February 2021။
Lee, Matthew (February 1, 2021)။ Biden threatens sanctions on Myanmar after military coup။
Statement by President Joseph R. Biden, Jr. on the Situation in Burma (February 1, 2021)။
"West condemns Myanmar coup but Thailand, Cambodia shrug"၊ Bangkok Post၊ Bangkok Post Public Company Ltd.၊ 1 February 2021။
"Myanmar's army seizes power, detains Aung San Suu Kyi" (in en-CA)၊ National Post၊ 1 February 2021။
"Myanmar military coup: Nordic and Asian reactions"၊ ScandAsia၊2February 2021။
Adkins၊ William။ "EU leaders condemn military coup in Myanmar"၊ Politico၊ 1 February 2021။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"UNSC takes no action on coup in Myanmar"၊ Gulf Today၊3February 2021။
UN Security Council searches for unity on Myanmar (in English) (Feb 2, 2021)။
Security Council fails to agree statement condemning Myanmar coup (in English) (Feb 3, 2021)။ “The UN Security Council has failed to agree onajoint statement condemning Monday’s coup in Myanmar, afteratwo hour long emergency meeting failed to secure the support of China,akey Myanmar ally andaveto-holding permanent member of the council.”
UN Security Council takes no action on Myanmar coup (in English) (February 3, 2021)။
Myanmar coup: China blocks UN condemnation as protest grows (in English) (Feb 3, 2021)။
"Aung San Suu Kyi could face two years in jail over ‘illegal’ walkie-talkies"၊ The Guardian၊3February 2021။